Heano zvidzidzo zverudo zvekuba kubva kune yedu yatinofarira terevhizheni terevhizheni - teles relay
Heano zvidzidzo zverudo zvekuba kubva kune yedu yatinofarira terevhizheni tv
By bryamangwanabe On June 30, 2020
Rudo dzimwe nguva runogona kuve rakaoma asi nerombo rakanaka isu tinogona kuvimba nemitambo yekutamba iyo kutipa zvidzidzo mukutapura pasina muganho!
Kuva nerudo kazhinji mufaro wakachena. Zviri nyore kana isu tiri mune ino mamiriro, isu tinofamba uye tinorarama hupenyu hwedu hwakanakisa. Nekudaro, hazviwanzo kuve pachena uye dzimwe nguva kupokana nekusanzwisisana zvinopinda. Kunyangwe isu tichida hafu yedu zvakanyanya, dzimwe nguva hatichaziva zvekuita kugadzirisa mamiriro kana kungozvinzwisisa. Uye zvinotonyanya kuoma kana iwe uchida munhu muchivande kwenguva yakareba. Kana aya mavara akateedzana akapukunyuka miedzo yakaipisisa, Trendy anokukumbira kuti udzokere kuzvidzidzo zverudo izvo zvatakaudzidziswa isu nhevedzano Usazeza kuisa mamwe muhupenyu chaihwo!
Rega vamwe vaite zvavanokanganisa
Zviri nyore kutaura, zvakanyanya kuoma kuita. Nekudaro, zvirinani kukurudzira mumwe uye kumupa rutsigiro rwake rwese pane kugara uchimutuka achiti ari kukanganisa uye kuti haubvumi. MuDawson mwaka wechitatu, Joey anowira murudo nemudzidzi achiri kuchikoro chepamusoro. Kuratidzana kwavo rudo kunotanga pane dzakaomesesa kubva pavanoputika mune dzakasiyana mbiri. Kune rake, Pacey ari kutanga kunyatsonzwira tsitsi kwaari..
Asi pachinzvimbo chekumurumbidza nekumupomera, anomukurudzira uye anozove wekutanga kuve aripo kwaari kana vaviri vacho vapedza kuparadzanisa. Pashure pacho, anozokwanisawo kukunda mwoyo wake. Muchidimbu, idyll inoumbwa nedhidhi yakanaka yekushamwaridzana uye kutsigira imwe ndiyo imwe yezvigadziko zvehukama hunobudirira.
Mufaro weumwe pamusoro pezvose
Kana iwe uchida mumwe munhu, iwe haufanirwe kunge uine udyire uye uvarege vafare kunyangwe izvo zvinoreva kuti kubvuma kuvaona vachienda. Izvi ndizvo chaizvo zvinoitika kuna Peyton pakutanga kweSchool Brothers Season 4. Iye achingoona kuti achiri kudanana naLucas asi achiziva kuti anoda Brooke, achaita zvese kuyedza kuvasanganisa uye kuvabvumidza kudzokerana.
Iye anotoenda kusvika pakunyararidza ake ega kuti arege kukanganisa nyaya yavo yerudo. Chibayiro chakaisvonaka! Imwe nguva gare gare, Lucas anozoona kuti ari kuda Peyton uye ivo vachazoroora kana kupera kwemwaka 6 wedanho. Sezvinei, kusava nebasa uye kusava nebasa, zvinogona kubhadhara!
Novelas: DZESVONDO DZESVONDO EPISODE 95 MELISSA DEMASKS OSLEM…
Kuratidza zvaunonzwa chiratidzo cheushingi
Kazhinji, patinoziva kuti tiri murudo, tinotya kuzvizarurira kumudiwa wedu. Chokwadi, hazvisi nyore nguva dzose kutaura mazwi matatu aya kune mumwe munhu uye kunyange zvakanyanya kana usiri muhukama nemunhu uyu. Nekudaro, kunyangwe kudonha kuchinogona kurwadza, kunogonawo kukonzera kupwanya kwako kuratidza manzwiro ako iwe pachako. Ani naani anoedza hapana kana chavanotaura. Kunze kwezvo, Lexie Grey akapedzisira atora chivindi chake mumawoko maviri kuti audze Mark Sloan kuti anomuda mune chirevo chakanaka zvekuti isu tichiri kutonhora tichingofunga nezvazvo. Diki rakatorwa kubva kuna Grey's Anatomy parizvino inotepfenyurwa paABC:
" Ndinokuda. Ndiri kudanana newe zvikuru. Uye ndinemi mune ganda rangu. Zvakaita sekuti uri kurwara. Ndatapukirwa naMark Sloan. Uye hapana kana chandinogona kuita kunze kwekufunga nezvako, handichagona kurara zvakare. Handichakwanisi kufema. Handichagona kudya zvakare. Uye ndinokuda. Ini ndinokuda iwe maminetsi ese ezuva rega rega uye ini ndinokuda. "
Gamuchira iyo imwe zvachose nezvikanganiso zvake uye hunhu
Chikwereti: Iyo CW
Hazvisi nyore nguva dzose kusvika ipapo asi zvakadaro asi chigadziko. Hapana akakwana, kana iwe kana mudiwa. Isu tinofanirwa saka kuzvigamuchira zvizere, kusanganisira chikamu chayo chine rima nekuti zvinomuita zvaari nhasi. Kana iwe ukafunga kuroora kana kuroorwa nemumwe munhu, haufanirwe kuyedza kuzvishandura kunyangwe mamiriro ezvinhu akaomarara. Ndo izvo Elena akakwanisa kuita naDamon mukati Vampire Diaries. Iye anokanganisa! Nekudaro, mukadzi wechidiki uyu anoguma avekutsungirira, anotsigira, nerudado uye kudada.
Zvirinani hazvo, iye akakwanisa kumufadza, iye akange atambura zvakanyanya kubva munhoroondo yake naKatherine. Muchidimbu, dzimwe nguva unofanirwa kutarisana nezvazviri: isu tinoda vanhu kunyangwe zvavo zvavanokanganisa kunyangwe iwe uchitarisira kuti vazoedza kugadzirisa.
Kuva akatendeseka ndiwo musimboti weukama hwakanaka
Kunyepa kunokandwa mumvuri pamusoro pehukama hwekudanana. Zvirinani kutaura chokwadi uye kuvaka murume nomurume pane nheyo dzakasimba uye dzakasimba. Uye iwe unogona kutitenda, kuvimba ndiyo kiyi yehukama hwehukama. Rangarira kuti kunyepa uye kuvhara-ups ndizvo zvakapotsa kudhara Oliver hukama hwake naFelicity mukati museve. Saka pane kuvimba naye, akasarudza kumuvanda kuti aive nemwanakomana. Nehurombo, yanga isiri nguva yekutanga. Kunyanya kubva paakaramba achingoita zvisina kumbomubvunza, pasina kunyatsomuita muhupenyu hwake.
Naizvozvo mukadzi wechidiki akasarudza kumusiya pane kugara nemurume asingakwanise kutendeseka naye. Sezvinobvumwa, Oliver akange adzidza kuzvivimba chete paLian Yu asi isu pachena tinonzwisisa zvikonzero zveFelicity. Kana zvese zvikafamba zvakanaka kudivi rerudo, tinokupa zano kuti utarise ma Outer Banks akateedzana, iyo Netflix nhepfenyuro inotaurwa nemunhu wese.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://trendy.letudiant.fr/ces-lecons-d-amour-a-piquer-a-nos-series-tv-preferees-a4805.html
Heano zvidzidzo zverudo zvekuba kubva kune yedu yatinofarira TV tsiye
Heano maNetflix mafirimu matsva & nhevedzano yekuona muna Chikunguru 2020
bhajeti rakasimba? Heano matanhatu ane hutano, ari nyore kugadzira mapikicha achangobva kuita zvishanu zvishanu
Novelas: DZESVONDO DZESHURE PARADISE EPISODE 95 MELISSA UNMASKS OSLEM IN FRONT ZAZVose…
Muwado, musikana ane makore masere okukura anoita kuti vese veSomalia vaseke